chums, Author at Chum's Solution Myanmar - Page2of 2
Chum's Solution Myanmar
AWS TECHNICAL BLOG
How to change the instance type from Smaller to Higher ?
ခု လုပ်မဲ့ article ဟာဆိုရင် မိမိ တို့ ec2 နဲ့ instance တစ်ခုကို အရင် launching လုပ်ခဲ့ ပြီးသူများအနေနဲ့ အကယ်လို့ မိမိတို့ ec2 instance မှာ app တွေအများကြီး run ထားမယ်ဆိုပါစို့။ အဲ့သလိုဆိုရင် မိမိတို့ ec2 instance type ရဲ့ CPU / Memory limit ကို ကျော်နေပြီ RUN ရတာလဲ နှေးလာပြီ။ အဲ့ဒါဆိုရင် Type ထပ်တိုးဖို့လိုလာပြီ။ဘယ်လိုတိုးရမလဲ ???
​အောက်ပါပုံ ကတော့ Instance type-t2.micro ကို အသုံးပြုထားတဲ့ EC2 ဖြစ်ပါတယ်။
How to change instance type?
Step1. Instance ကိုတိုးဖို့ကို Instance Setting > Change Instance Type ကနေပြောင်းရမှာပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံမှာဆိုရင် လုပ်လို့မရတာကို တွေ့ရမှာပါ။
အရင်ဆုံး change မလုပ်ခင် မိမိတို့ run ထားတဲ့ EC2 ကို အရင် stop ထားရပါမယ်။
Stop ဆိုတဲ့ button ကို နှိပ်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ running instance ကို ပိတ်လိုက်ပါ။
Instance State က stopping လုပ်နေတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ခုဆိုရင် Instance Type-t2.micro /Instance State-Stopped ဖြစ်နေပြီး Public IP active မဖြစ်တော့တာကိုလဲ တွေ့မြင်ရမှာပါ။
Step2. Instance Type ကိုချိန်းပါမယ်။ Instance Setting> Change Instance Type ကို ရွေးလိုက်ပါ။
ခုအသုံးပြုနေတဲ့ t2.micro ကနေ CPU/Memory ပိုများတဲ့ Instance type ကို ပြောင်းဖို့ကို ဘေးက up/down arrow ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Instance type-m3.medium ကိုတိုးလိုက်ပါမယ်။မိမိလိုအပ်တဲ့ space/time ပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ time ဆိုတဲ့အရာကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ မိမိလိုအပ်တာ ၁နာရီနဲ့ Load 100 လောက်ပြီးချင်တာလား ? ဒါမှမဟုတ် ၂နာရီ နဲ့ Load 100 ပြီးမှာလား ? ဆိုတာ user ရဲ့ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားပါတယ်။
အောက်ပါပုံဟာဆိုရင် မိမိ ရွေးချယ်တဲ့ instance type ကို တွေ့ရမှာပါ။ပြီးရင် အသုံးပြုဖို့ confirm ဖြစ်ပြီဆိုရင် Apply button ကို နှိပ်ပြီး ဆက်သွားပါမယ်။
ခုဆိို တိုးလိုက်တဲ့ instance type ဟာ stopped အနေနဲ့ရှိနေပါပြီ။
Step3. ဒီအဆင့်ကတော့ တိုးခဲ့တဲ့ instance ကို stopped အခြေနေကနေ Active လုပ်တဲ့ အဆင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Instance ကို Start လုပ်မှာ confirm ဖြစ်တာကြောင့် Yes,Start ကို နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ အကယ်လို့ ထပ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် Cancel နှိပ်ပြီး ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။
Instance ဟာဆိုရင် Pending State မှာရှိတာကို တွေ့ရမှာပါ။
တိုးလိုက်တဲ့ Instance ဟာဆိုရင် Running State အခြေနေမှာရှိပြီး Public IP ဟာဆိုရင် Changes ဖြစ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဒီနေရာမှာဆိုရင် လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ မေးစရာရှိလာပါပြီ။အရင် EC2 ကို Launching လုပ်တဲ့ article မှာဆိုရင် EIP နဲ့ Instance ကိုချိတ်ခဲ့ပါတယ်။ EIP ထားခြင်းဖြစ် IP changes တဲ့ event ဖြစ်ခြင်းမှ မိမိရဲ့ webserver link ကို protect လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Step4. အပေါ်က အဆင့်ထိကတော့ instance ကို upgrade လုပ်ခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် instance ဟာ အပေါ်မှာတိုးခဲ့တဲ့ Space အများကြီးသုံးဖို့မလိုတော့ရင် ပုံမှန် EC2 (free tier state) ကို ပြန်ချိန်းဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့ဆို user အနေနဲ့ Charges အများကြီးမကုန်ဖို့ရန်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အရင် t2.micro (free of charges) ကို ပြန်ပြောင်းဖို့ဆိုရင် အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ အတိုငး် အရင်ဆုံး instance state ကို stop လုပ်မှသာ instance type ကိုပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Instance ကို Stop လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် Yes,Stop ကို နှိပ်ပါမယ်။
အောက်ပါပုံဟာဆိုရင် Instance State ကို Stop လုပ်တာ Pending state ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။
အောက်ကပုံအတိုင်း Instance State ဟာ Stopped ဖြစ်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ Instance ကို Stop လုပ်တဲ့ process အောင်မြင်ပါပြီ။
Step5. Instance Stop လုပ်ပြီးရင် Type ကို ချိ်န်းပါမယ်။
အောက်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံမှာဆိုရင် အရင်က တိုးခဲ့တဲ့ Type ဖြစ်ပါတယ်။ခုက လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ Type ထက် နည်းတဲ့ Type ကိုချိန်းမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် up/down arrow ကိုနှိပ်ပါ။
t2.micro (free of charge) type ကို ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုဆို t2.micro ကို ရွေးထားပြီးကြောင်းတွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။Confirm ဖြစ်ရင် Apply နှိပ်ပြီး ဆက်သွားပါမယ်။ ထပ်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင် Cancel နှိပ်ပြီး ဆက်လက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ခုဆို ( Instance Type-t2.micro/Instance State-stopped ) ဖြစ်တာကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Step6. Instance လဲ ချိန်းပြီးပြီ ဖြစ်တဲ့ Instance run ဖို့အတွက် Instance ကို Start လုပ်ပါမယ်။
Yes,Start ကိုနှိပ်ပြီး ဆက်သွားပါမယ်။
Instance State-pending ကနေ Running ဖြစ်ရင် (free of charge)type ကိုအောင်မြင်စွာ ပြောင်းလဲ ပြီးပါပြီ။
မိမိရဲ့ normal state ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိပါပြီ။
Author chumsPosted on July 18, 2018 July 24, 2018 Categories AWS TutorialLeaveacomment on How to change the instance type from Smaller to Higher ?
How To Launch EC2 Instance ?
Amazon’s Elastic Compute Cloud(EC2) ဆိုသည်မှာ Amazon Web Services(AWS) infrastructure app တွေ run ဖို့အတွက် virtual server တစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။
AWS cloud ထဲမှာ AWS subscriber တွေက compute server တစ်ခုကို request/provision လုပ်နိုင်တဲ့ web service တစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။
AWS ရဲ့ on-demand EC2 instance ကနေ subscriber/user တွေက virtual server တွေကို နာရီအလိုက် ငှားရမ်းပြီး မိမိတို့ရဲ့ app တွေကို deploy လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ instance type ပေါ်မူတည်ပြီး rates အမျိုးမျိုးနဲ့ သုံးစွဲတဲ့ နာရီကို ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ user တွေရဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ business လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး AWS ကနေ multiple instance types တွေကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ CPU နဲ့ memory လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာနဲ့ instance တွေကို ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။အကယ်လို့ cost ကို save ဖြစ်စေရန် အသုံးပြုဖို့ မလိုတော့တဲ့ အခါမှာလဲ instance ကို terminate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ tutorial ထဲမှာ on-demand EC2 instance ဘယ်လိုဆောက်ရမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရအောင်
AWS services ကို Login ဝင်ခြင်း
အရင်ဆုံး AWS account ကို login ဝင်ပါမယ်။ ပြီးရင် ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်က AWS service tab ကို နှိပ်လိုက်ရင် အောက်ပါအတိုင်း AWS Services တွေဖြစ်တဲ့ Compute, Storage, Database, etc အစရှိတဲ့ services များကို တွေ့ရမှာပါ။ခုက EC2 ကို launch လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် Compute service အောက်က EC2 ဆိုတဲ့ service ကို ရွေးလိုက်ပါ။
အောက်ပါပုံအတိုင်း EC2 dashboard ကို မြင်ရမှာပါ။ AWS EC2 မှာ run နေတဲ့ resources information များကို အကျဉ်းချုပ်တွေ့မြင်ရမှာပါ။
Running resources of EC2
EC2 dashboard ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ EC2 server ကို ဘယ် region မှာ setup လုပ်ချင်လဲ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ဆိုရင် singapore server မှာကိုယ်ရဲ့ server ကို setup လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Note: server တွေမှာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု service / charges/network speed တွေ ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။(လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ကိုယ် setup လုပ်မဲ့ region ကို ရွေးချယ်နိ်ုင်ပါတယ်)
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Region ရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ EC2 dashboard ကို ပြန်သွားကြရအောင်။Instance ကို create လုပ်ဖို့ “Launch Instance” button ကို နှိပ်ပါ။
Amazon Machine Image(AMI) ကို ရွေးချယ်ခြင်း
ကိုယ်ဆောက်မဲ့ instance ဟာ ဘယ် Operating System platform ကို အခြေခံပြီးဆောက်မှာလဲ ဆိုတာ ရွေးချယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခု ကတော့ default Amazin Linux (64 bit) ကို ဆောက်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Instance Types ကို ရွေးချယ်ခြင်း
ဒီအဆင့်ကတော့ ကိုယ့် business ရဲ့ လိုအပ်ချက် ပေါ် မူတည်ပြီး instance အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ t2.micro instance ကို ရွေးလိုက်ပါမယ်။ဘာကြောင့် t2.micro instanceကို ရွေးချယ်ရသလဲဆိုတာက မိမိတို့ instance capacity မှာအသုံးပြုမှုအတွက် charges ပေးဆောင်စရာမလိုအပ်ခြင်းကြောင့်ပါ။ ပြီးရင် “Configure Instance Details” ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Note: ဒီ instance type ဟာဆိုရင် 1vCPU နဲ့ 1GB memory ရှိတဲ့ server ဖြစ်ပါတယ်။
Choose Instance Type
Instance ကို ပြင်ဆင်ခြင်းStep (1)
ဒီအဆင့်မှာဆိုရင် ကိုယ့်ဆောက်တဲ့ instance ကို VPC/Subnet အစရှိတဲ့ security တွေ setup လုပ်ပါ့မယ်။ instance တစ်ခုကို launch လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် “1” လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်။
Note: no of instance ဆိုတဲ့ နေရာမှာ instance 20 ကို တစ်ပြိုင်တည်း config လုပ်နိုင်ပါတယ်။
No of instance
Purchasing Options မှာဆိုရင် ‘Request Spot Instances’ option ကို unchecked လုပ်ထားပါ့မယ်။
Note: on-demand instance အစား spot instance ကို launch လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် တော့ ‘Request Spot Instances’ option ကို checked လုပ်ပါ။
ဒီအဆင့် ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ EC2 server ကို basic networking လုပ်တဲ့ အဆင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
VPC ရဲ့ အတွင်းမှာရှိတဲ့ subnet အတွင်းမှာ EC2 ကို launch လုပ်ပါမယ်။
အရင်ဆုံး VPC/Subnet တွေကို အရင် create လုပ်ထားရပါမယ်။ default အနေနဲ့ လဲ config လုပ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်အဆင့်မှာ VPV/Subnet တွေ ဘယ်လို create လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို နောက် artical မှာအသေးစိတ် ရှင်းပြပါ့မယ်။
ဒီ tuto မှာတော့ ဆောက်ပြီးသား VPC/Subnet ရှိတဲ့ အတွက် choose လုပ်လိုက်ပါ့မယ်။ မရှိရင် တော့ default ကို choose လိုက်ပါ။
Instance ရဲ့ IP ကို auto setup လုပ်နိုင်သလို EIP (Elastic IP) နဲ့ ချိတ်လို့ရပါတယ်။ခုက EIP နဲ့ ချိတ်မှာမို့ Disable ကို ရွေးလိုက်ပါ့မယ်။
Auto Assign IP
IAM role option ကို ‘None’ လို့ keep လုပ်ထားပါမယ်။ specific user / group နဲ့ IAM role ဟာ ဆကျနှယျမှု မရှိစဖေို့တှကျ none လုပျထားခွငျး ဖွစျပါတယျ။
Shutdown Behavior – အကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ instance ကို ရုတ်တရက် shut down လုပ်တဲ့အခါ instance ကို delete မလုပ်ဘဲ instance ဟာ stop အနေထားရောက်သွားမှာပါ။
ဒီအဆင့်မှာတော့ stop ကို ရွေးလိုက်ပါမယ်။
ဒီ option ကတော့ instance ကို terminate လုပ်တဲ့ အပိုင်း ပါ။
AWS မှာ security mechanism ပိုင်းပါရှိပါတယ်။
“accidental termination protection” option ကို enable လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် instance ကို delete မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ မတော်တဆ instance terminate လုပ်မိခြင်းမှ protect ဖြစ်စေချင်တဲ့ အတွက် check လုပ်ခဲ့ပါမယ်။
Monitoring option – အရေးကြီးတဲ့ business instance တစ်ခု ဆိုရင် instance ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ ဒီ option ကို check လုပ်ခြင်းဖြင့် instance ၏ အချိန်လိုက် ပြောင်းလဲမှုတွေကို စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ခုတော့ uncheck လုပ်ထားပါမယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ AWS ကနေ instance တွက် Basic monitoring တွေကို charges ပေးဆောင်စရာမလိုဘဲ support လုပ်ပေးထားလို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Under Tenancy option – ဒီ step မှာတော့ shared လုပ်လို့ရတဲ့ tenancy ဖြစ်တဲ့အတွက် “shared-runashared hardware instance”ကို select လုပ်ပါမယ်။တကယ်လို့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ instance မှာ develop လုပ်ထားတဲ့ app ဟာ highly secure app ဖြစ်တယ်ဆိုရင် dedicated capacity option ၂ခုကို AWS က support လုပ်ထားပါသေးတယ်။
နောက်တဆင့် “Add Storage” option ကတော့ instance ရဲ့ data volumes ကို add လုပ်နိုင်မဲ့ အပိုင်းပါ။
“Add Storage” step မှာ instance ကို default အနေနဲ့ auto “General Purpose SSD root volume of 8GB” set လုပ်ပါမယ်။ (Maximum volume size ကို 20GB ထိရှိပါတယ်။) instance volume size ကို လိုသလို ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
AWS ဟာဆိုရင် EBS volumes types ၃မျိုးဖြစ်တဲ့ (Magnetic, General Purpose SSD, Provisioned IOPs) ကို provide လုပ်ပေးထားပါတယ်။ကိုယ့် App ရဲ့ IOPs လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်လို့ရပါသေးတယ်။
Add Storage Type
Instance မှာ Tag များပေးခြင်း
Tag ဆိုတဲ့ option ကတော့ instance တွေကို Key/Value ပေးလို့ရတဲ့ အပိုင်းပါ။ ဒီလို tag name တွေပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် instance များစွာဆောက်ထားတဲ့ အခါမှာဆိုရင် AWS account user အနေနဲ့ ဘယ်instance ဟာ ဘာကို ဆိုလိုလဲဆိုတာကို ခွဲခြားသိမြင်နိ်ုင်ပါတယ်။Tag name ပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ department, environment ပေါ်မူတည်ပြီး ပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့သလို ပေးခြင်းအားဖြင့် instance တွေကို ကွဲပြားစွာသိနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ instance ကို Dev_Web server 01 လို့ပေးထားလိုက်ပါမယ်။ Security Groups ကို ဆက်သွားပါမယ်။
Set the Tag
Security Groups ကို ပြင်ဆင်ခြင်း
Security group ဟာဆိုရင် instance ရဲ့ traffic port ကို set လုပ်တဲ့ အပိုင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ Instance’s OS firewall ကို set လုပ်ဖို့အတွက် AWS ကနေ support လုပ်ထားတဲ့ firewall ကို ရွေးချယ်ပြီး set လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ယခု ဆောက်နေတဲ့ server က webserver ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပထမဆုံး security group ကို အသစ် create လုပ်ပါမယ်။
နောက်တဆင့်အနေနဲ့ security group ကို name ပေးရမဲ့အပိုင်းပါ။Name ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ် instance တွက် ဆောက်တယ်ဆိုတာကို ကွဲခြား သိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်တဆင့်ကတော့ instance ကို protocol တွေ setup လုပ်တဲ့ အပိုင်းပါ။ instance ရဲ့ firewall ကို setup လုပ်ထားခြင်းဖြင့် Instance ကို secure လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Setup Security Groups
မိမိရဲ့ Instance မှာ ရွေးခဲ့ တဲ့ parameters တွေကို review အနေနဲ့တွေ့ရမြင်ရမှာပါ။
Instance ကို ဝင်ဖို့အတွက် key pair ကို create လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Key Pair တစ်ခုမှာ public-private keys တစ်စုံ ပါဝင်ပါတယ်။
AWS ဟာ instance ထဲမှာ private key ကို store လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး မိမိတို့က public key ကို download လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်လို့ မတော်တဆ download လုပ်ထားတဲ့ key pair ဖိုင် ပျောက်သွားတာမျိုးဖြစ်ရင် ထပ်ပြီး download လုပ်မရတဲ့ အတွက်ကြောင့် safe and secure ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။
key pair ကို Create လုပ်
key ကို name ပေး
secure ဖြစ်တဲ့ folder မှာ Download and save လုပ်
Download And Save Key pair
Key ကို downloading and saving ပြီးရင်တော့ instance ကို launch လုပ်ပါမယ်။
Instance ကို launching လုပ်နေပါပြီ။
Launch လုပ်တဲ့ log file တွေကို ဖော်ပြထားတာပါ။
left pane က ‘Instances’ option ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ instance status မှာ ‘Pending’ ဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။
Instance State ‘Running’ ဖြစ်ရင် Launch လုပ်ခြင်းအောင်မြင်ပါပြီ။
Instance တွက် AWS ကနေ “Public DNS Server” Link ကို ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
EIP(Elastic IP) ကို သုံးပြီး Instance နဲ့ချိတ်ခြင်း
AWS မှ static public IP ကို provide လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကို Elastic IP လို့ခေါ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆို instance ဆောက်တဲ့အခါ public IP ကို AWS မှ auto ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။Instance ကို stop/reboot လုပ်မိတယ်ဆိုရင် public IP ကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ app တွေ run ထားတဲ့ instance အတွက် static IP ရှိမယ်ဆိုရင် EIP ကို အသုံးပြုပြီး public networks ကနေ connect လုပ်နိုင်ပါပြီ။
EC2 Dashboard ရဲ့ ဘယ်ဘက် ထောင့်ကနေ ‘Elastic IPs’ ကို သွားရပါမယ်။
Go to EIP
Elastic IP Address အသစ်တစ်ခုကို Allocate လုပ်ပါမယ်။
Allocate New Address
Elastic IP Address တစ်ခုရရှိပါပြီ။
Receive EIP address
မိမိရဲ့ instance ထဲမှာ ခုနက EIP address ကို assign လုပ်ပါမယ်။
ခုနက allocate လုပ်ခဲ့တဲ့ EIP ကို select လုပ်လိုက်ပါ။
Actions -> Associate Address ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
မိမိတို့ဆောက်ခဲ့ EC2 instance ကို ရွေးပါ။
Associate ကို နှိပ်ပြီး ဆက်သွားပါမယ်။
Set EIP for Instance
မိမိရဲ့ instances screen ကို ပြန်သွားပါ။ မိမိရဲ့ instance ဟာ EIP ကို ရရှိတာကို တွေ့ရမှာပါ။
Get EIP for Instance
ဒီအဆင့်ဟာဆိုရင် EC2 instance မှာ server တွေဆောက်မယ် APP တွေ RUN ဖို့ PUTTY ဆိုတဲ့ (.EXE) ကို RUN ထားဖို့တော့လိုပါတယ်နော်။ Instance ရဲ့ EIP နဲ့ ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Goto with PUTTY
အပေါ်မှာ download လုပ်ခဲ့တဲ့ Key Pair file ကို ပထမဆုံး puttygen ဆိုတဲ့ ( (.exe) ကိုတော့ run ထားရပါမယ်။) app ကို သုံးပြီး download လုပ်ခဲ့တဲ့ (.pem) file ကို (.ppk) file အဖြစ်သို့ ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Auth ကို သွားပါမယ်။
.ppk (putty private key) format ဖိုင်ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
Choose .pem file
Instance ၏ Linux Prompt ထဲ ရောက်သွားရင်တော့ မိမိရဲ့ instance လုပ်ခြင်းအောင်မြင်ပါတယ်။
Get into the Linux Prompt
ခုဆိုရင် မိမိ application တွက် on-demand EC2 server တစ်ခု ကို အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
Author chumsPosted on July 13, 2018 July 24, 2018 Categories AWS TutorialLeaveacomment on How To Launch EC2 Instance ?
How to create AWS Account ?
Amazon Web Services (AWS) အကောင့်ဖွင့်ရခြင်းမှာ AWS cloud services တွေကို လက်တွေ့ အသုံးချနိုင်ဖို့တွက် ဖြစ်ပါတယ်။ AWS cloud services ဆိုတာ ဘာလဲ ? AWS ဆိုသည်မှာ secure ကျကျ cloud services platform တစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ cloud services တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ မိမိရဲ့ business ပိုင်ဆိုင်ရာ database storage များ ၊ အခြားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ မှုများစွာဖြင့် ယနေ့ ထိတိုင် world wide မှာ customers millions ပေါင်းများစွာကနေ applications များကို bulid လုပ်ပြီး သုံးစွဲ နေပါပြီ။ Amazon ကနေ account confirm ဖြစ်မှသာ AWS ၏ cloud services များကို အသုံးပြုပြီး မိမိbusiness structure ကို ပိုပြီး secure ကျကျ develop လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ AWS Account ဖွင့်ရန် step by step ကို အောက်မှာ ပုံနှင့်တကွ အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါတယ်။
Step1. ပထမဆုံး AWS အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက် Amazon Sign Up Page ကို သွားရပါမယ်။
Sign Up Console
Step2. မိမိအကောင့်တွက် Mail ,Password နဲ့ AWS Account Name တို့ကို setup လုပ်ပြီး continue နှိပ်ပါ။
Step3. Professional or Personal ဆိုတဲ့ Account type မျိုးစား (၂)မျိုးရှိပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ Personal အကောင့်ကို create လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Step4. Valid Credit သုံးပြီး Payment form ကိုဖြည့်ပါ။ ပှီးရငှ Secure Submit ကိုနှိပပှါ။
Step5. Country code, Phone number နဲ့ Security Check ကို data များဖြည့်သွင်းပြီး Call Me Now ကိုနှိပ်ပါ။ Phone Verification Page ကနေ အလိုလျောက် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါလိမ့်မယ်။
Step6. Call Me Now ကို နှိပ်ပီးရင် browser ကနေ4digit code ပေါ်လာပြီး ဖုန်းအဝင် လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ Browser မှာပေါ်လာသော digit4လုံးကို ဖုန်းရဲ့ touch pad မှာ ရိုက်နှိပ်လိုက်ပါ။
Step7. Account ဖွင့်တာ အောင်မြင်ကြောင်း browser မှာအောက်ပါပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Step8. အကောင့်သစ်ဆို ၁နှစ် free ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ၁၂လ free Basic Plan ကို ရွေးပါ။
Step9. Sign in to the Console ကို နှိပ်ပြီး စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Welcome to AWS
Author chumsPosted on July 9, 2018 August 8, 2018 Categories AWS TutorialLeaveacomment on How to create AWS Account ?
Chum's Solution Myanmar Proudly powered by WordPress